စစ်တွေ မငြိမ်သက်မှု တွင် သေဆုံးသူ တိုးလာ ၊ နာဇီ ရပ် ကွက် ကို ရိုဟင်ဂျာ တွေ မီးရှို့| The FNG
စစ်တွေ မငြိမ်သက်မှု တွင် သေဆုံးသူ တိုးလာ ၊ နာဇီ ရပ် ကွက် ကို ရိုဟင်ဂျာ တွေ မီးရှို့ 
June 12, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
← ရေနံမြေ အလုပ်သမား သပိတ် နောက်ပိုင်း အကြီး ဆုံး အလုပ်သမား သပိတ် ချီတက် မှု စပြီ | Update |
စစ်တွေ မြို့ရဲ့အခြေအနေ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းနေဆဲ | Photo →
6 responses to “စစ်တွေ မငြိမ်သက်မှု တွင် သေဆုံးသူ တိုးလာ ၊ နာဇီ ရပ် ကွက် ကို ရိုဟင်ဂျာ တွေ မီးရှို့ ”
koko July 28, 2012 at 12:17 am · ·
whoever want to fight with kalar, i will support money $$$.
Bo Gyi June 16, 2012 at 6:02 pm · ·
မူဆလင်တွေကတော့ ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ကုလားလိမ်ကုလားကျစ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အတိုင်းပဲ အခုချိ်န်မလုပ်လဲနောင်တချိ်န်မှာ တိုက်ခိုက်ခိုက်လာမှာ အသေချာဆိုတော့ ငါတို့ ခရစ်ယန်၊ဗုဒ္ဓ၊ ဟိန္ဒူ၊ ရဟူဒီတို့ စည်းစည်းလုံးလုံးနှင့် တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုတင် လက်နက်စုဆောင်းထားပါ.ကိုယ်လုံပညာများကို သင်ကြားထားကြပါ.တချို့ ရှောင်ထွက်ခြင်တဲ့ ဗမာလူမျိုးအချင်းချင်းလဲ အွန်လိုင်းတင်မကဘူးအပြင်မှာပါ သတိပေးပြောကြားကြပါ.
right man June 14, 2012 at 10:42 pm · ·
ကျေးဇူးပြူပီး…သတင်အမှန်တွေကိုသာဖော်ပြပါ….EMG….လို..တဖက်စောင်းနင်းတဲ့သတင်းတွေကိုမဖော်ပြပါ န နင့်ကျေးဇူးပြူပီး…သတင်အမှန်တွေကိုသာဖော်ပြပါ….EMG….လို..တဖက်စောင်းနင်းတဲ့သတင်းတွေကိုမဖော်ပြပါ န နင့်
may moe June 12, 2012 at 2:56 pm · ·
hi…freedom news group
ကျေးဇူးပြူပီး…သတင်အမှန်တွေကိုသာဖော်ပြပါ….EMG….လို..တဖက်စောင်းနင်းတဲ့သတင်းတွေကိုမဖော်ပြပါ န နင့်
tayzar June 13, 2012 at 1:07 am · ·
i say , Ma May Moe ….. What news do you think EMG is unfair.? Can you introduce with EMG to ROHINJAR to get the news from their side. Or I think you should better go to the side of ROHINJAR and get the news . What do you say ?
သတိုးအောင် June 12, 2012 at 2:30 pm · ·